Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguAndrei
Kubo bonke abafuna amava amnandi, iCasa din Plai yindawo yokundwendwela kwaye uyonwabele. Ukuba ukulala kumagumbi apholileyo akuzukwanelisa iimfuno zakho zeholide, ungakhathazeki. Sineqela lemisebenzi epholileyo esinokukhetha kuyo: imidlalo yebhodi, itafile yepool, iibhayisekile zokubaleka okukhulu entabeni, itafile yeping-pong, ihupula yebhola yomnyazi kunye neminye imisebenzi emininzi ekufuneka yenziwe ngeyure nje enye uqhuba ukusuka kwindawo.
"Isitayile sendlu yakudala yeentaba enezinto zokujonga i-manor yanamhlanje", njengoko olunye undwendwe lwayibiza njalo, iCasa din Plai ibonelela ngamagumbi amane okulala aneebhedi ezimbini. Ababini kubo banesofa eyongezelelweyo eyongezelelweyo kumntu omnye. Kwakhona, xa kukho imfuneko sinokukongezelela ibhedi yegumbi lokuhlala. Ngaphandle kwamagumbi okulala kunye negumbi lokuhlala / lokutyela, sibonelela ngekhitshi kunye negumbi elikhulu lokuzonwabisa, elisezantsi. Indawo izaliswe zizinto eziluncedo, ukuze ungadikwa kwaphela!
I-Provita de Sus yidolophana engabonakaliyo kwindawo ekhenketha kakhulu yaseRomania, i-Prahova Valley. Sisondele kakhulu eBucharest okanye eBrasov (1h30), kwaye nakwezinye iindawo zokuchithela iiholide zesizwe/zamazwe ngamazwe (Sinaia, Busteni, Predeal). Idolophu yaseCampina (i-10-15 min kude) ihanjiswa kakuhle xa kuziwa kwiindawo ezikhangayo, iindawo zokutyela, iipaki njl.
Mna ngokwam okanye "umphathi wendlu", uNksz. Magda uya kukwamkela ngosuku oza kufika ngalo, kwaye siya kugcina unxibelelwano lwethu nawe ngokwesidingo sokwenza.